Indlu emlanjeni, imbonakalo emangalisayo ukusuka efestileni. - I-Airbnb
Indlu emlanjeni, imbonakalo emangalisayo ukusuka efestileni.
Igumbi elinobunewunewu libekwe kwisakhiwo esisisiseko sexesha likaStalin elinekheshi kunye nentendelezo kwisithili sembali kwiziko iTbilisi. 6 min ukuhamba ukuya kwibhotwe likamongameli. Ifestile ejongene ngqo neyona nto iphambili yesixeko, umlambo, intaba iMtatsminda & tower. Umlambo uhamba phambi kwefestile kwaye kuvuleka indawo enkulu evumela ukubona zonke izinto ezibonwayo zaseTiflis. ♥️♥️♥️ Cofa kwifoto yam enye kunye nelinye IXESHA kwaye UYA KUBONA IIFOTO ZESIBINI SE-APARTMENT YAM EBUHLE EKUSONDELENE KAKHULU!
Kwelinye icala lendlu, eyona ndawo idumileyo yabakhenkethi abahambahambayo esixekweni sisitrato esidala esinendawo yabahambi ngeenyawo (njenge-Old Arbat), eneekhefi ezingama-60, imivalo kunye neeresityu ezisebenza iiyure ezingama-24, ezineecanopi ezimibalabala, iiambrela ezinemibala kunye neesofa. ekunene esitratweni, iihotele, iigalari zewayini, iivenkile zewayini (ngokungcamla), iivenkile, iivenkile, iivenkile, iivenkile zezikhumbuzo, iibhanki, ikhemesti, ikhachapuri kunye neekhinkali taverns, McDonalds, Dunkin Donats, Georgian ukupheka ekhaya (ukutya kosapho) kunye neWater Lagidze edumileyo. cafe (imizuzu emi-3 ukusuka ekungeneni) ibekwe malunga nobude bonke besitrato sikaKumkani uDavid Agmashenebeli (eyayisakuba yiPlekhanov Street, kwaye nakwiSitrato saseVorontsov ngaphambili). Isitalato sabahambi ngeenyawo singena kwindawo entle yaseSaarbrucken square, kwaye kukho indawo yokutyela yaseTiflis, eyaziwa ngokubanzi phakathi kweendwendwe zekomkhulu, kunye nokutya okumnandi. Kwimizuzu eyi-10 yokuhamba ukusuka endlwini kukho indawo yepati "Factory" eyaziwayo kumazwe aseYurophu (njengeFactory of Winery), apho abantu abaqaqambileyo, abanomdla abavela kumazwe ahlukeneyo babuthana. "I-Factory" ineevenkile zokudala kunye nezitolo, iikhefi ezingaqhelekanga kunye nemivalo, imiboniso kunye neekonsathi zesisa, imiboniso yefashoni kunye neziganeko ezahlukeneyo ezinomdla. Ukusuka kwiFactory ngeenyawo imizuzu eli-15 kwaye ukwi-bazaar, kwiMarike yeDeserter edumileyo apho kukho intabalala yeziqhamo ezimibalabala, imifuno kunye nayo yonke ithunzi yohlaza olwahlukeneyo, kwaye umoya uzaliswe ngamavumba eentyantyambo, iziqholo kunye neepikeli. . Kwindawo enye, imarike emnyama, eyaziwayo phakathi kweendwendwe zekomkhulu, ithengiswa kufuphi.
Ngakolunye uhlangothi lwendlu, apho ifestile enkulu ye-panoramic ihamba khona, unokuyonwabela umbono wendlela umlambo waseMtkvari ojikelezayo, ojikelezayo (Kura) uhamba nabalobi, amadada asendle kunye nama-seagulls, aculwa kwiindinyana zikaPushkin, Lermontov, Griboedov kunye ezinye iimbongi ezidumileyo, ababhali, amagcisa kunye nabahambi. Kwaye kubonakala kuwe kubo bonke ubuqaqawuli bayo, iNtaba iMtatsminda kunye nesimboli sesixeko njengenqaba kamabonwakude (ifestile iphambene nje), ebusuku ikhazimla kuyo yonke imibala yomnyama kunye nesakhiwo sekholomu edumileyo 'Funicule. yokutyela', iFunicular Park kunye neTbilisi Botanical Garden. Ukusuka efestileni ukuya ekhohlo nasekunene unokubona iibhulorho ezimbini zakudala ngaphesheya komlambo kumbala wothando wobusuku. Isondele kakhulu indawo ethandwa kakhulu " Ibhuloho eyomileyo "... Ngasekunene unokubona i-glass skyscraper eyaziwayo ye-Biltmore Hotel, isakhiwo sepalamente yangaphambili kunye nesinye isakhiwo esiphakamileyo i-Radisson Blue Hotel sisecaleni kwayo.
Kwicala lasekunene lendlu kukho igadi kawonkewonke kunye nesikhumbuzo sikaGriboedov kunye neNdlu yoMtshato, kwaye ngakwesobunxele ukusuka kwifestile ekukhanyeni kobusuku umntu unokubona inqaba eyaziwayo yaseNarikala, umfanekiso kaMama waseGeorgia kunye neCathedral. eSameba. Uhambo lwemizuzu emi-4 ludume kubo bonke abakhenkethi kunye neendwendwe zekomkhulu ezivela kwihlabathi lonke, "iBridge Bridge" ngaphezu komlambo, ipaki apho wonke umntu oza kubona kwaye athenge izinto zakudala kunye neengubo zabaculi baseGeorgia. Xa udlula kwenye ipaki, uzibhaqa ukwikhilomitha enguziro kumbindi wekomkhulu, eFreedom Square okanye eLyberty Square. Ngaphesheya komlambo yeyona ndlela iphambili yekomkhulu, iRustaveli Avenue enepaki entle, kunye neCawe yaseKashveti, iimyuziyam (imyuziyam eluhlaza okwesibhakabhaka) kunye neeholo zemiboniso, kunye neRussian Griboedov Theatre, kunye neRustaveli kunye neMardjanishvili Theatres (imizuzu emi-4 ngeenyawo. ukusuka kwindlu), i-Opera kunye neBallet Theatre, kunye neeholo ze-cinema, kunye neziko elikhulu lokuthenga kunye nokuzonwabisa "Igalari yeTbilisi". Kwelinye icala lendlu yindawo yesibini ebalulekileyo yekomkhulu, iSt King David Agmashenebeli Avenue, umakhi. Indlu ibekwe phakathi kwezikhululo ze-metro ezi-3 eziphambili: iRustaveli, iLyberty Square kunye neMardjanishvili (ekufutshane). 4 imiz ukuya kwisikhululo sebhasi. Imizuzu eli-15. kwisikwere esikhulu. Kwintendelezo yendlu kukho iindawo zokupaka iimoto zakho, kwaye ulawulo olukude olusuka kumqobo wokungena ludluliselwa kuwe (ngolungiselelo lwangaphambili) .Indlu enqabileyo eyenziwe ngabayili bezobugcisa abaziwayo njenge "fashion house" kwaye ixhotyiswe nazo zonke. iintlobo zobuchwepheshe kunye nezinto eziyimfuneko. Kukho igumbi lokulala elahlukileyo elinebhedi ephindwe kabini "yeQeen", i-orthopedic mattress anti-stress evela eBellona, ​​25 cm ubukhulu, kunye nomgangatho okhethekileyo we-thermal kunye nokhuseleko lwe-matras olususwayo, i-orthopedic, i-latex, iphefumula. imiqamelo enenkqubo ye-thermo-ventilation esuka kwinkampani yakwaPirelli enamakhava asuswayo, igumbi lehotele iManamo Tach's bedspread esuka kumgangatho ophezulu, syntipon lightweight. Kwigumbi lokuhlala kukho i-sofa esongwayo, udonga lweyunithi yekhitshi, i-hood enokukhanya. I-San node eneshawa, enesambrela yeshawa ebanzi (irhine egcweleyo), enesomisi enwele kunye neventilation yombane, ishawa ecocekileyo, umatshini wokuhlamba, i-microwave, i-cooktop, i-ketile yombane, i-iron, i-ayina ibhodi kunye nesomisi, ifriji-ifriji, ikhabhathi yewayini eneentlobo ngeentlobo. yewayini zaseGeorgia zakudala, iibranti ezivela kubaboneleli abahlukeneyo, i-chacha kunye newhisky, i-wi-fi TV, i-laptop, ikiti yoncedo lokuqala, i-umbrella, i-raincoats, iincwadi zesikhokelo, izikhumbuzo, amakhadi eplastiki kwimoto yentambo, iiglasi zewayini, amakhandlela kunye ne-champagne ehlala ibanda .
Isilingi, ukuhamba, izibane ze-cannon kwi-railing ekhethekileyo ukudala ukukhanya kwe-entourage.
Izithethi ezinolawulo olude lwebluetooth kunye nenkqubo "yesandi esipheleleyo" zakhiwe kwisilingi yokuhlambela. Iikhabhathi zasekhitshini kunye neewodrophu zezinto zakho, iimpahla kunye neesutikheyisi.
Kunye nokutshintsha kokukhanyisa okubuyisela umva ukuze kube lula kuwe. I-air conditioning enamandla, i-extractor fan, ifeni kunye nemigangatho eshushu. Iingcango zetsimbi zokungena kunye ne-peephole kunye nentsimbi. I-suite yenziwe ngabaculi baseGeorgia, i-niches eludongeni kunye nomgangatho kunye nezibane zokuhombisa. Onawo kusoloko amalayini amatsha akumgangatho ophezulu, iitawuli zehotele ezi-4 lundwendwe ngalunye, izitya, iislippers (ezifunwayo), isomisi seenwele esakhelwe ngaphakathi, isepha, ishampu, iigels kunye nezinto zococeko. Iti, ikofu, iisosi zelizwe, i-sabeels, i-tkemali, i-adjika, i-jam, njl. Kwifriji kukho ukutya, izidlo ezidliwayo, i-sausage, i-cheeses, i-snacks, amantongomane, i-dessert, iilekese kunye netshokolethi, i-Borjomi, i-lemonade, ijusi, ibhiya, iziphuzo ezinxilisayo.
Ungabhukisha intlanganiso kwaye udlulisele kwisikhululo seenqwelomoya, ugcino, ukhenketho lokukhenketha kwesixeko kunye nelizwe. Ukutya kwasekuseni, isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa, isidlo sasemini kunye nokulungelelaniswa kwamaqela eeholide ngokweminqweno yakho. Ifowuni ephathwayo enekhadi leSIM lendawo, ukurenta imoto, ukugcinwa kwemithwalo, ukuhlamba impahla. Uluhlu olupheleleyo lweenkonzo. Thumela izinto ezilityelweyo.
Siyakwamkela kwi "fashion house" yethu, thatha kuphela ikhadi leplastiki, uya kudibana nayo yonke into kwindawo ... Ngexesha leeholide zelizwe, uya kufumana isipho esivela kumamkeli etafileni yakho - iwayini yaseGeorgia kunye nesitya seziqhamo. Ukuphunga iglasi yewayini yaseGeorgia, uhleli ngokukhululekile kwisofa, unokufumana ulonwabo lokwenyani, uya kubona umbono omangalisayo ukusuka kwifestile yepanoramic (esiyidalele yona) ukuya eTiflis, kuMlambo iMtkvari (Kura), kunye nolwandle. intaba iMtatsminda kunye nesimboli sesi sixeko Tower kwi funicular. Owona mbono uhle kakhulu ekuzeni kokusa, ekutshoneni kwelanga kwaye ngakumbi ebusuku kunye nezibane ezinemibala emininzi yesixeko esidala. Apha uya kuziva ukubetha kwentliziyo yeso sixeko, uthandane nayo kwaye uchithe iintsuku ezingenakulibaleka kunye nathi, eziya kukhunjulwa ixesha elide. UDavid uqeshwe kakuhle yindlu yeendwendwe ukukunceda ekusombululeni imibuzo eyahlukahlukeneyo ngexesha lokuhlala kwakho eGeorgia ...
4.90 · Izimvo eziyi-302
Imizuzu eyi-1 ukusuka kwindlu kwaye ukwisitrato sabahambi ngeenyawo saseTiflis esivaliweyo kwizithuthi, esenza kube lula ukuhamba phakathi kweebhari ezininzi zecafe phakathi kwesitrato kwaye ukonwabele umbono wesakhiwo sembali esibuyiselweyo sesixeko.
Ndiyakuthanda ukuncokola neendwendwe. Ndibanika inombolo yam yeselula, VibER, WhatsApp kunye ne-imeyile. Ihlala ikhona.